Thailand billionaire keen to restart tourism | People making news
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Thailandey miliardera maniry hamerina ny fizahantany indray
Billionaire Dhanin Chearavanont, filohan'ny Charoen Pokphand
Home » Lahatsoratra » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Thailandey miliardera maniry hamerina ny fizahantany indray
Billionaire Dhanin Chearavanont, filohan'ny Vondrona Charoen Pokphand, dia manentana ny governemanta mba hiala sasatra ny fepetra fanidiana sy handray ireo mpanao dia lavitra haingana araka izay tratra, ary hamadika ny firenena ho "fialofana azo antoka" ho an'ireo mpitsidika manankarena.
💠Mr Dhanin, izay filohan'ny vondrona lehibe indrindra amin'ny sakafo sy ny fambolena Charoen Pokphand (CP) Group, dia nilaza fa ity hetsika ity dia hanampy amin'ny famelomana indray ny sehatry ny fizahantany.
"Ny fatiantoka ara-toekaren'i Thailandy amin'ny fikatsoana dia tombanana ho 16 miliara baht isan'andro na efa ho 500 miliara isam-bolana, ny fikatsoana lava kokoa dia handany antsika bebe kokoa," hoy izy.
💠Thailand dia nihidy tsy hidina hatramin'ny 09 martsa - 14 Mey 2020 (65 andro) taorian'ny fihetsiky ny governemanta mba hampijanona ny fitomboan'ny tranga COVID-19 voamarina. Nilaza ny governemanta fa tokony ho 1 isan-jato ny tahan'ny aretina virus coronaavirus.
💠 Miharihary ny fiatraikany ara-toekarena amin'ny fihidiana satria mpiasa an-tapitrisany no nangataka tombontsoa ho an'ny tsy an'asa. Voadona mafy ihany koa ny sehatry ny fizahan-tany rehefa nitsahatra tsy nandray mpitsidika vahiny ny fanjakana.
💠Ny Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) dia tsy nitatitra aretina vaovao tamin'ny Alarobia, fotoana voalohany tao anatin'ny 65 andro hatramin'ny nanombohan'ny fanidiana. Ny fanjakana dia nahitana tranga miisa 3,017.
"Tsy afaka miandry isika mandra-pivoaran'ny vaksinina sy hamokarana be dia be hanaparitahana ny vahoaka rehetra," hoy Andriamatoa Dhanin araka ny resadresaka nifanaovana tao amin'ny Bangkok Post. Manampy hoe, "Tsy ho tafavoaka velona amin'izany ny toekarena."
💠Nilaza izy fa ny sehatry ny fizahan-tany dia 16-17% isan-jaton'ny harinkarena faobe ary tokony hamelona azy ireo noho ny fanatsarana ny toe-javatra misy ny virus.
💠Mr Dhanin dia nanolotra ny governemanta hisarika ireo mpizahatany lafo be erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanasongadinana ny fahombiazan'ny Thailandy tamin'ny famoahana ny Covid-19.
"Ny isan'ny trangana aretina sy ny fahafatesan'ny olona ao Thailand dia ambany dia ambany raha oharina amin'ny firenena hafa, na dia natomboka taty aoriana aza ny fanidiana antsika," hoy izy. “Betsaka koa ireo mpizahatany sinoa eto amin'ny firenena.”
💠Taratry ny zava-misy fa ny mpitsabo sy ny hopitalintsika no tsara indrindra ary mila milaza amin'izao tontolo izao ny momba azy isika.
💠Nisongadina Andriamatoa Dhanin Forbes gazety “Ny harena 50 an'i Thailand” amin'ity taona ity. Izy dia iray amin'ireo mogul 20 ao amin'ny fanjakana izay nangatahan'ny praiminisitra Prayut Chan-o-cha mba hamolavola tetikasa fanampiana ho fanampiana ireo olona tratry ny valanaretina.
💠Nilaza izy fa tokony hararaotin'ny governemanta ireo tarehimarika ambany any Covid-19 ary hamadika ny fanjakana ho “fialofana azo antoka” ho an'ny olona manankarena erak'izao tontolo izao.
“Manana hotely sy hotely kintana dimy izahay; manana hopitaly kintana dimy sy dokotera tsara indrindra koa izahay, ”hoy Andriamatoa Dhanin.
"Raha azontsika atao ny mampanan-karena ny manankarena fa ny mijanona ao Thailandy dia azo antoka kokoa noho ny fireneny dia ho avy izy ireo."
Nilaza izy fa izao no fotoana hanovanan'i Thailand ny sarim-pizahantany amin'ny "habe ho amin'ny kalitao".
"Raha manomboka anio isika dia afaka ho tonga mpitarika eo amin'ity tsena ity," hoy Andriamatoa Dhanin.
“Fantatra amin'ny fandraisam-bahiny sy ny hafanana ary ny hatsaram-panahiny i Thailand.”
"Ho tonga mpamerimberina ireo mpizahatany manaitra", hoy ihany izy. “Ny mpizahatany manankarena iray tapitrisa dia mitovy turista ara-dalàna dimy tapitrisa.”
💠Mr Dhanin dia nilaza fa mino izy fa hiverina haingana ny indostrian'ny fizahantany aorian'ny Covid-19 mandritra ny 'ara-dalàna vaovao'.
"Betsaka ny olona mety tsy hiverina any amin'ny birao intsony satria fantany fa afaka miasa [lavitra] izao," hoy izy.
“Mety hiasa amin'ny morontsiraka, tendrombohitra na any ampitan-dranomasina mihitsy aza izy ireo. Tsy maninona izany raha mbola afaka manao ny asany izy ireo. ”
💠Mr Dhanin dia nilaza fa nahatsapa an'io fironana vaovao io ny CP ary hampihatra ny politikam-piasana an-trano amin'ireo mpiasa ao aminy aorian'ny virus.
"Heveriko fa ho kely kokoa ny tranon'ny birao amin'ny ho avy," hoy izy. “Tsy ilaina intsony ny manangana tranobe lehibe.”
"Ireo tranobe lehibe ananantsika ankehitriny dia mety hivadika trano fandraisam-bahiny na hotely," hoy Andriamatoa Dhanin nanampy.
💠Raha nanontaniany izay tokony hataon'ny governemanta hanampiana ireo orinasa madinidinika hitazona azy ireo mandritra ny areti-mandringana, dia nilaza ny mpanao raharaham-barotra fa tokony hamoaka fatorana 30 taona hahazoana vola ary hanolotra findramam-bola malefaka amin'izy ireo.
"Heveriko fa telo tapitrisa tapitrisa baht dia ho ampy hisorohana ny tsy fananan'asa betsaka," hoy Andriamatoa Dhanin.
"Orinasa marobe no miady mafy mba ho velona satria tsy manana ny vola ilaina ilainy hiasa," hoy izy nanampy.
"Mila miditra an-tsehatra ny governemanta mba hahazoana antoka fa afaka mampiasa mpiasa hatrany izy ireo farafaharatsiny." Nilaza Andriamatoa Dhanin fa azo atao izany satria ny trosa ampahibemaso ao amin'ny firenena dia 42% amin'ny harinkarena faobe.
💠 Nilaza izy fa nanoratra tany amin'i Gen Prayut ho valin'ny fangatahana vonjy nataon'ny praiminisitra. Ny CP dia handany 700 tapitrisa baht hanohanana ireo tetikasa hanampiana ireo olona marefo.